I-NASA ikhombisa ukuthi i-Arctic Ice Incibilike Kanjani Eminyakeni Engu-32 Eyedlule | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-VIDEO: INASA ikhombisa ukuthi i-Arctic ice incibilike kanjani eminyakeni engama-32 edlule
Isithombe - Screenshot
Iqhwa lase-Arctic liyancibilika, futhi ikwenza ngesivinini esisheshayo kangangokuba inganyamalala ngokuphelele emashumini ambalwa eminyaka edlule. Futhi, njengoba iplanethi ifudumala, ungqimba olubandayo oluntanta olwandle i-Arctic nolwandle olukuzungezile alunakuqhubeka lukhona.
Kuze kube manje besazi ukuthi iqhwa elincane, okungukuthi, iqhwa elineminyaka embalwa kuphela ubudala, licibilika kalula ehlobo elishisayo. Kepha ngeshwa, futhi »neqhwa elidala» liyanyamalala.
Izilinganiso zeqhwa lolwandle lwase-Arctic aziphelele, ngakho-ke abacwaningi be-NASA basebenzise indlela eyenziwe yiYunivesithi yaseColorado (e-United States) ebavumela ukuba babe nombono ocishe ucace wokuthi ungqimba luguquke kanjani. kweqhwa kusuka ngo-1984 kuze kube manje, kusukela Ungalinganisa izinga lokushisa, usawoti, ukuthungwa nekhava leqhwa lokho kuhlale phezu kweqhwa ngenxa yezinsimbi zomculo ezincanyana ze-satellite microwave.
Ngakho-ke, benze i-animation ekhombisa ukuthi iqhwa belikhula kanjani futhi lingena enkontilekeni eminyakeni engama-32 edlule.
Alikaze libe khona inani elilinganayo leqhwa. Njalo ngonyaka, iyanda ebusika futhi yehle ehlobo. Lokhu kuvamile. Iqhwa elisinda ebusika liyaqina njengoba isikhathi sihamba, likwazi ukukhula phakathi kwemitha elilodwa kuya kwelesi-1 phakathi neminyaka yokuqala, naphakathi kwamamitha amathathu kuya kwayi-3 lapho "eyiqhwa elidala". Lezi zinsuku, ngenxa yalokho, ziyamelana kakhulu nomthelela wamaza noma iziphepho; Noma kunjalo, akukho okubavikelayo emazingeni okushisa anyukayo.
UWalt Meier, ongumcwaningi eNASA Goddard Centre eMaryland, eMelika, ukusho lokho iningi leqhwa elidala lalahleka, futhi wanezela:
Ngo-1980 izingqimba zeminyaka eminingi zakha ngaphezu kwe-20% yesembozo seqhwa. Namuhla bafinyelela ku-3% kuphela.
Uma ukuthambekela kungashintshi, i-Arctic kungenzeka ibe nehlobo elingenalo iqhwa maduzane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-VIDEO: INASA ikhombisa ukuthi i-Arctic ice incibilike kanjani eminyakeni engama-32 edlule
Ukuncibilika kwe-Arctic kuyithinta kanjani iSpain?